Configuring DDNS kuti tenderera Via Modem + router – Taylor Lopes ツ Blog
nyevero: Post Izvi zvimwe zvekushandisa pfungwa chisingazobudiswi kugadziriswa.
Zvakatanga pandakagamuchira opareta Hi Modem / router Technicolor TD5136v2 Wi-Fi, maiwe! Saka ini Akatenga Asus RT-N56U router kuona kana akavandudza Wi-Fi chiratidzo, kurerutsa date kurasikirwa.
Kuti upenyu hwangu nyore, cascateei samambure yangu, rikaisa Asus router kwakabatana kune router kurudyi Technicolor. mune mamwe mazwi, musha wangu samambure akasimuka 2 routers. Zvakashanda zvakanaka, asi ndaifanira kugadzira Nat (chiteshi vorega / mabasa) zvose routers kuti IP rangu kamera zvinyatsobuda (Internet). Ona muenzaniso sei waiva:
INTERNET      > Modem/O    > ROUTER/ASUS > COMPUTER/kamera
INTERNET > Modem / O > ROUTER / ASUS > COMPUTER / kamera 200.28.189.1 > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.N
The dambudziko iri “madzinde” Maiva muna DDNS. Ndinotenda munoziva kuti DDNS, pashure zvose ndicho chikonzero ndauya pano. zvimwe, Ndapota kutora akaongorora uye kuverenga pamusoro.
Cherechedza kuti, pamwe cascading ichi Ndakaita, Modem / Hi ndiye aifanira inowanikwa pamwe Internet uye vakatora musoro IP, sezvo router / Asus akagamuchira chete chando IP kubva Modem / Hi. Izvi chaizvoizvo aiva dambudziko, nekuti kana Ndakaedza akamisa DDNS router / Asus, akapa kukanganisa anotevera:
"The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10,X,X,X, kana 172.16.x.x).. router Izvi zvinogona kuva akawanda-Nat ezvinhu uye DDNS basa haagoni kushanda ezvinhu ichi"
Nzvimbo rwevanodzvinyirira Asus kare achitokuudza kuti dambudziko iri:
chitsamba: kana Wireless ari kushandisa private IP kero Wan (192.168.X.X, 10.X.X.X, kana 172.16.X.X), router ichi kuwana-ndizvo-munhu Multi samambure vachatitaka-rukoko Nat. The DDNS webasa kungasashanda iri mhando nzvimbo
chitsamba: kana Wireless ari kushandisa private IP kero Wan (192.168.x.x, 10.x.x.x, kana 172.16.x.x), router ichi vachange vari multi-rukoko Network Nat. The DDNS webasa kungasashanda iri mhando nzvimbo
Kuzvipedza kwaiva kuita Modem / Hi kushandira “rudzi zambuko” (nzira zambuko), mune mamwe mazwi, Modem / Hi akangova basa rake sezvo modulator uye demodulator (uye haachipo router), relaying zvose date rukova zvakananga router / Asus. In Muchiitiko ichi, zvinoita sokuti router pachayo / Asus agare dzavo dzakazvitsaurira inowanikwa nokuda Internet, kuwana IP Wan Valid uye kuva nebasa pakuita PPPoE authentication. tarisa:
INTERNET      > Modem/O     > ROUTER/ASUS > COMPUTER/kamera
INTERNET > Modem / O > ROUTER / ASUS > COMPUTER / kamera 200.28.189.1 > BRIDGE / Bridge > 192.168.0.1 > 192.168.0.N
Unobva Modem uye router (zambuko muoti)
Next Post, pasinei anoreva Hi Modem uye router kubva Asus, ari configuration zvingava zvakafanana chero Modem kana router.
danho 1 – Uise Modem mu zambuko muoti (nzira zambuko)
Kuwana Modem control panel / Hi. Izvi kunowanzoitwa nokuvhura Browser uye achitaipa http:://192.168.0.1 (kana zvimwe IP se 192.168.1.1, 10.0.0.1, nezvimwewo). The default Username uye pasiwedhi iri “arun” nokuti vose. Tarisa uye kushandura zvinotevera marongero:
GADZIRIRA > Internet Setup > Internet Settings > Internet Connection Type > Bridge Mode (pachinzvimbo PPPoE)
danho 2 – Batanidza pomumbure wire pakati Modem uye router
Tora chimwe Network waya (UTP – RJ / 45) uye ufambe pakati namano: mumwe mugumo achipinda rimwe 4 Modem zvengarava / Hi uye mumwe anoenda iri Wan / Internet router / Asus.
danho 3 – Kugadzira kubva router kushanda pamwe DHCP kwakaita
Kuwana router wacho control panel / Asus. Izvi kunowanzoitwa nokuvhura Browser uye achitaipa http:://192.168.1.1 (kana zvimwe IP se 192.168.0.1, 192.168.2.1, 10.0.0.1, nezvimwewo). The default Username uye pasiwedhi iri “arun” nokuti vose. Tarisa uye kushandura zvinotevera marongero:
Advanced Settings > Lan > Basic Config > Dzinoita DHCP Server > Ehe
danho 4 – Kugadzira kubva router kuna PPPoE authentication
Kuwana router wacho control panel / Asus. Search uye kuti inotevera configuration:
Advanced Settings > wan > Account Settings > Pasiwedhi > oi123
#1 Advanced Settings > wan > Basic Config > Wan Connection Type > PPPoE #2 Advanced Settings > wan > Account Settings > PPP Username > @ Oi Oi #3 Advanced Settings > wan > Account Settings > Pasiwedhi > oi123
Username ichi uye pasiwedhi PPPoE ndiye chiero Hi. Zviripachena unofanira kushandisa imwe Username uye pasiwedhi kana yakasiyana mutakuri. Kana usingazivi, chete mudane keriya wako uye kukumbira kuti Login Data kuti PPPoE authentication. Runhare ndiye Hi 10631.
izvi, yatova kuti Internet kwenyu kushanda kubudikidza Wi-Fi router / Asus. Dzimwe nguva zvinogona kanguva kuti tsvagurudza uye kumisa kubatana, shivirira. Ndinotaura izvi, zvakaitika kwandiri; Ndakafunga hazvina kushanda uye akanga chete kumirira kwekanguva kuti zvakashanda. Testa ikoko!
Kuunza uye configuring munhu DDNS
Chokwadi ichi ndicho chakanakisisa chikamu Post, nekuti ndakasangana ane basa anonakidza inonzi DNS-O-Matic. wakadzikama, I tsanangura!
Dambudziko guru ndiro routers kutsigira DDNS servers shoma, kazhinji chete No-IP uye DynDNS. Asi kukanganwa No-IP uye DynDNS! mabasa aya havasi zvakakwana vakasununguka kana apo, Vane patinogumira, zvakafanana kuva kuvandudza ose 30 Mazuva uye ichi ndicho saccal!
I kunyanya kushandisa kutya (FreeDNS), anoshanda uye akasununguka chaizvoizvo. Asi sei kuita kana router haritsigiri Kutya? Ndipo apo DNS-O-Matic. Luckily ari router kubva Asus inotsigira DNS-O-Matic, kuti ndipe wangu DNS-O-Matic rave Subdomain yangu kusikwa Uchitya, nokuchengeta kwangu Wan IP zvevakomana. havana kunzwisisa? Tichafara Panguva iyoyo, asi kuyeuka kuti izvi zvichaita chete kubatsira kana router wako ane kutsigira DNS-O-Matic.
danho 1 – Gadzira (dzesub)Vachitya inotongwa mu
1. kushanya http://freedns.afraid.org
2. Click on "Dynamic DNS" nokusika account kubudikidza Muterere "Setup nhoroondo pano".
3. Log in, tinya Muterere "Subdomains" uye "wedzera"
4. Cherechedza hapana combobox "Domain" kuti, hapana yokupedzisira, It ane nzira "Vazhinji zhinji kupfuura iripo ...", tinya pano!
5. Fume chidzitiro, tinya "Pamwe Domain yokunyoresa" uye kusarudza mumwe zviuru nzvimbo iripo.
danho 2 – Kuwana kiyi (Key) kwete afrai.org
(Unofanira ichi chinokosha mberi!)
2. Clique hapana Muterere Dynamic DNS,
3. Panoperera peji, clique hapana Link “Direct URL” aireva Subdomain makasika Uchifambirana 1
4. chinokosha (Key) ndicho chikamu URL pashure “update.php?”.
Direct URL: http:://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
anokosha (Key): iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
Direct URL: http:://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf Chave (Key): iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
danho 3 – Gadzira nhoroondo iri DNS-O-Matic uye kuwedzera Service (kutya)
1. kushanya https://www.dnsomatic.com/
2. Click "kuumba yakasununguka DNS-O-Matic nhoroondo" nokusika account
3. Log in, tinya "Wedzerai Service" bhatani
4. hapana combo “–Sarudza basa–“, sarudzo “afraid.org”
5. No kenttä Key(?) Achitaura namatidza Key akasikwa padanho Subdomain 1.
Ona sei kuti kiyi Uchifambirana 2: “Kuwana kiyi (Key) kwete afrai.org”
6. Baya bhatani “pdate Nhoroondo Info”
danho 4 – Configuring DNS-O-Matic pamusoro router
Search uye kuti inotevera configuration:
1. mu “Server”, sarudzo WWW.DNSOMATIC.COM
2. mu “Host Name”, nzvimbo “all.dnsomatic.com” (kana kusiya shaya chinhu)
3. mu “User Name kana E-mail Address”, yamunopinda mushandisi yako vakasikwa DNS-O-Matic
4. mu “Password kana DDNS Key”, kupinda kwako pasiwedhi DNS-O-Matic nhoroondo
5. ekupedzisira, tinya bhatani “shandisa”
kuita izvi, DDNS router / Asus, kuburikidza DNS-O-Matic, vapiwa kuva mutariri updating ari IP Wan pamwe Uchitya.
kuti, ikozvino une akasununguka nzvimbo pamwe IP kusvika musi! Mugore kumbobvira-Rinozvikudza ip, haana DyDNS.
Uwandu kwakafanorongwa: 21792
28 Ndira 2017 Taylor Lopes	afraid, asus, zambuko, ddns, DNS-O-matic, dnsomatic, dyndns, freedns, Modem, Nat, hapana-Rinozvikudza ip, router, technicolor
4 Wongororo “Configuring DDNS kuti tenderera Via Modem + router”
Muri paakasika domai
7 Nyamavhuvhu 2018 kuti 15:35
Leandro Santos (LiNk) akati:
Makorokoto paPost mudiwa wangu!
Ini ndanga ndichiedza kwenguva yakareba kuti router yangu ishande uye netipi yako zvaive nyore kwazvo.
Mune yangu nyaya iyo DDNS yandaishandisa kubva kuAsuscomm.com kunyangwe.
10 Gunyana 2018 kuti 0:08
LUIZ GUSTAVO ANOTENDA MOREIRA akati:
zvakanaka mangwanani. kukuru romukova, asi ini ndinoshandisa live fiber uye kana ndikaiisa mubhiriji mode ini ndinodzima tambo yefoni nerubatsiro rwe modem kure. Iwe unoziva kuzviita neimwe nzira?
7 Kubvumbi 2020 kuti 11:50
Ndine dambudziko rakafanana. Yakagadziriswa kugadzirisa?
3 Chivabvu 2020 kuti 11:12
Copyright © 2021 taylorlopes.com kubva Oct 2012, 3.004.527 upindo